Jirama Ambalavato Antsirabe: Nipoaka ny fitehirizan-tsolika
dimanche, 30 septembre 2018 11:16
Saika zava-doza no niseho tao amin’ny Jirama Ambalavato Antsirabe ny harivan’ny sabotsy 29 septambra lasa teo. Tokony ho tamin’ny 8 ora latsaka folo hariva, dia nipoaka ny fitobian-tsolika iray, miaty 110 cc.
Raha ny fantatra dia ny fiakaran’ny hafanana be loatra tamin’io fitaovana io no nampipoaka azy. Nipitika tany amin’ny 300 metatra moa ny saron’ilay fitobian-tsolika ary niledaka nanaka-danitra ny afo, izay tombanana ho hatrany ny amin’ny 20 metatra tany ho any ny lelafo tamin’izany.
Ny loza dia mbola nisy fitobian-tsolika maromaro nisy Gas Oil nanodidina teo, ankoatry ity nipoaka ity. Soa ihany moa raha ny fanazavana fa efa mba tsy be loatra intsony ny tahiry tao anatiny tao. Tsy nisy azo natao moa afa tsy ny fiarovana ireo fitobian-tsolika nanodidina ihany fa dia nojerem-potsiny ny afo, mandra-pahalanin’ny tao anatiny.
Isan’ny olan’Antsirabe hatrany ny tsy fisian’ny fitaovana famonoana afo eto an-toerana fa dia ilay tranainy be an’ny orinasa Cotona ihany no mba nanao izay vitany teo. Tsy hisy fiatraikany amin’ny famantsian-jiro eto Antsirabe moa aloha hatreto iny loaza iny raha ny fanazavan’ny Talen’ny Jirama Antsirabe.